Afghanistan:Hadalka NATO waxaa uu Halis Gelinayaa Bukaanka Afqanistaan - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Afghanistan:Hadalka NATO waxaa uu Halis Gelinayaa Bukaanka Afqanistaan
09.12.2009 | Qeybta Guud, War-Saxaafadeed
Ururka Bani’aadamnimada ee Caalamiga ah ee Caafimaadka, Médecins Sans Frontières (MSF), ayaa si weyn uga soo horjeestey hadal dhowaan ka soo yeerey Xoghayaha Guud ee NATO Anders Fogh Rasmussen kaas oo laga dhadhansan karey in uu leeyahay in NGO-yadu ay noqdaan “dhinaca jilicsan” ee istiraatiijiyadda militeri.
Si aad u dhagaysatid khudbadii Mr. Rasmussen riix halkan
Meelaha ay iskahorimaadyadu ka jiraan, MSF marna kama dhinac shaqeyso, waxna kuma darsato istiraatiijiyad militeri; madax-bannaannideena iyo dhexdhexaadnimadeenna buuxda ayaa inoo sahleysa in aannu gaarso dadka u baahan gargaar caafimaad oo degdeg ah.
Hadallada la midka ah midkan ka soo yeerey NATO ayaa halis dheeri ah u abuuraya bukaannadeenna iyo shaqaalaheenna, hadalladaas oo u ekeysiinaya in hawsha caafimaadka ay qayb ka tahay istiraatiijiyad militeri.
Markii ay MSF dib ugu noqotey Afqanistaan sanadkii 2009kii ka dib markii uu iskahorimaadku ka sii darey, ayaa waxa ay ujeeddadu ahayd in ay gargaar caafimaad oo degdeg ah oo la soo gaari karo ay siiso dadka ku go’doomey degaannada dagaalladu ka dhacayeen. Si ujeeddadaas ay u gaarto, MSF waxa ay wadahadal la gashey dhammaan dhinacyadii dagaallamayey, haddii ay yihiin Afqanistaaniyiin, Ciidamada Ammaanka ee Caalamiga ah iyo kooxaha mucaaradka ahba, si aaney hub ula soo gelin daaradda cusbitaalka ay MSF ka shaqeyso ee Kabul iyo Lashkargah. Markaas oo keliya ayaa dadka u baahan gargaarka caafimaadka ay ku kalsoonaan karaan ammaanka goobta caafimaadka oo ay markaa soo geli karaan, maaddaama haddii aaney meesha ciidan militeri joogin uu macnaheedu yahay in dhismahaas uusan dhinacna soo weerarin.
Sida uu ku talinayo Mudane Rasmussen oo ah in ururrada rayidku sida MSF ay si un ula shaaqeeyaan, ama ay noqdaan ‘dhinaca jilicsan’ ee ciidamada NATO, ayaa halis gelineysaa isfahamkan waxaana ay cusbitaallada, bukaannada iyo shaqaalaha ay halis hor leh u gelineysaa in ay noqdaan kuwo ay soo bartilmaameedsadaan xooggaga mucaaradka.
Mudane Rasmussen waxaa uu ku talinayaa in Afqanistaan ay “tusaale” u noqoto wada-shaqeynta NATO iyo NGO-yada. MSF waxa ay ugu baaqeysaa Mudane Rasmussen, iyo sidoo kale dhammaan qaybaha ku lugta leh iskahorimaadka, in ay ixtiraamaan sida loogu baahan yahay in loo kala saaco ujeeddooyinka siyaasadeed iyo kuwa militeri, iyo gargaaar caafimaad oo ah mid bani’aadamnimo oo madax bannaan.
Tags: Afghanistan, Nato, NGO